Igumbi lokulala eli-2 elisanda kulungiswa kunye nendawo yokupaka, lizaliswe yifanitshala yanamhlanje kunye nokukhanya kwelanga okuhle! Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, thenga izithako zakho ozithandayo kwaye uziphekele isidlo sangokuhlwa. Yonke ifanitshala ihonjiswe ngamalaphu athambileyo n izixhobo zendalo, Impahla yokulala itshintshiwe ngalo lonke ixesha! Imizuzu emi-3 ukuhamba ukuya eWestfield, imizuzu emi-5 ukuya kwiSikhululo sikaloliwe, imizuzu engama-25 ukuya eSydney CBD, indawo yakho yokumisa enye yokuthenga, ukuzonwabisa nokuzonwabisa. Ilungile indawo yokuhlala, njengomsebenzi osuka ekhaya, okanye usapho.
-Wifi yasimahla kunye neNetflix
-2 lokulala, Luxury lounge kunye nokukhanya kwelanga yendalo
-Ikhitshi langoku elinesitovu serhasi esimtyibilizi kunye nezixhobo zombane (ifriji, iMicrowave, iDishwasher, iOveni, iziXhobo)
-I-air-conditioning ye-Central duct kuyo yonke indawo
-Impahla yangaphakathi kunye newodrophu yokugcina
-Indawo yokupaka yokhuseleko yeyure ezingama-24 yasimahla
Le ndlu isandula ukulungiswa ibonelela ngezinto ezininzi eziluncedo kwindlela yokuphila eneendawo zokutyela ezininzi, iibhari zewayini, kunye neendawo zokutyela zonke ngaphakathi kohambo olufutshane. Ukunxibelelana neeNdwendwe.
Imizuzu eyi-1 ukuya kwiindawo zokutyela, imiz emi-2 ukuya kwiziko lokuthenga eWestfield, Fumana i-1000s yabathengisi abadumileyo befashoni n ngaphezulu.5 imiz ukuhamba ukuya kwisikhululo sase-Allawah, imiz eyi-8 uhambe uye kwisikhululo sase-Hurstville.15 imiz ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseSydney. Amagqabantshintshi: Ngenxa yezithintelo zakutsha nje zikaRhulumente ze-COVID-19, siyalelwe ukuba siyivale iPool & Gym de kube ngama-31 kaNovemba.
Ivenkile ye-inzone kunye neMemori yeNdawo yokutyela kumgangatho osezantsi.Starbucks,Macdonald,KFC,18 Grams Esprsso,Rokko Japanese BBQ,Hurstville Chinese Restaurant ngokuhamba.
Siya kuba khona kuphela xa ufuna ukuba sibe khona.24/7 contactable ngefowuni kunye ne-imeyile.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-5528